DADKA REER GUURAAGA AH EE BARIGA SOMALILAND OO QARKA U SAARAN INAY GAAJO & HARRAAD U DHINTAAN | Saxil News Network
DADKA REER GUURAAGA AH EE BARIGA SOMALILAND OO QARKA U SAARAN INAY GAAJO & HARRAAD U DHINTAAN
Hargaysa (Saxilnews): Xaaladda abaareed ee ka taagan gobollada bariga Somaliland, ayaa la sheegayaa in ay marayso meel aad u halis ah, isla markaana ay hadda muuqato saan-saan ah in dadku ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan gaajo iyo haraad.Abaartaasi oo si weyn u saamaysay gobollada Sool, Sanaag, Saraar, Togdheer iyo degaamadda hoos yimaadda, ayaa sababtay in ay le’daan inta badan wixii ay xoolo dadku haysteen, iyadoo wixii u soo hadhayna ay yihiin kuwo liita.
Koox weriyeyaal ah oo ka socda wasaaradda warfaafinta Somaliland oo maalmahan-ba u kuurgelaya xaaladda nololeed ee dadka iyo duunyadda dadka degaamadda abaartu ku dhufatay ayaa soo sheegay in degaamadda ay soo mareen ay ka jirto Abaar kulul oo si toos ah u taabatay dadka iyo duunyadaba.
Sida uu ku soo waramayo weriye Maxamed Xuseen Cali, oo ka tirsan TV-ga qaranka Somaliland waxa uu soo sheegay in ay soo mareen degaamo ka kala tirsan goboladda Saraar, Sanaag iyo Badhan, isla markaana ay uu indhihiisa ku soo arkay xoollo tiro badan oo abaarta darteed u le’eday, diif iyo haraad ka muuqda dadkii xoolo dhaqatadda ahaa. Sidoo kale waxaa ka muuqda degaanka in uu xaalufay, iyadoo meelaha qaarkood la mooddo gel-gelin aan weligeed waxba ka bixin, isla markaana ay indhuhu diidayaan in aad ku sii hayso abaarta daran eek a jirta awgeed. Iyadoo dadku ay u baahan yihiin in si deg deg ah gurmad iyo caawimo loola gaadho.
Waxa kale oo uu intaa ku daray weriyuhu in ay safarkoodda ku soo mareen degaanka Bohol oo ka tirsan gobolka Sool, iyagoo uga sii gudbay bannanka Daba-jiite iyo Laba-Dunlay, ilaa tuuladda Siigo-dheer, oo iyadu ka tirsan degmadda Ceel Af-weyn ee gobolka Sanaag. Meelahaasi ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin deegaamada sida aadka ah u xaalufay, isla markaana ay abaartu haysato dadka xoolo dhaqatadda ah, iyadoo dadkii xoolo dhaqatadda ahaa wixii u hadhay xoolahooda ay miciin bideen in ay meelo kale ula hayaamaan , inkastoo ay jiraan qoysas ay xooluhu u socon kari waayeen.
Mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatadda ah ee degaamadda ay abaartu ku jirto gaar ahaan meesha la yidhaahdo Siigo-dheer oo ka tirsan degmadda Ceel Af-weyn ayaa ka waramay halka ay marayso xaaladoodda nololeed, waxaanu yidhi “Tuuladan la yidhaahdo Siigo-dheer oo ka tirsan Ceel Af-weyn ayaanu deganayn, waxaa nagu dhufatay oo na haysata abaar aad u ba’an, dadkii wuu ka guuray wixii ka guuri karayay, wixii aan ka guuri karaynina way joogaan, cid u gar gaartana ma haystaan. In yar oo Adhi ah, wixii abaarta ka soo hadhay ayaan saaka (shalay) ka soo kexeeyay meeshii aan deganayn, oo aan waxba inoo jirin, wuu ii socon waayay oo halkaa aan imika joogo wuu ii dhaafi waayay.
Dadku wuxuu u baahan yahay wax u gar gaara, IILAAHAY ba gar gaarka iska lehe. Dhibaatadda ugu daran ee na haysata biyo la’aan ayaa ka mid ah, daawo la’aan ayaa ka mid ah.” Geesta kale meelaha ay haatan abaarta ugu xun ka taagan tahay waxaa ka mid ah degaanka Karin biyood oo ka tirsan degmadda Ceel Af-weyn ee gobolka Sanaag, iyo nawaaxigeedda halkaasi oo ka mid ahayd meelaha ay sida weyn dadku xoolaha ugu dhaqdaan gaar ahaana Adhiga, hase yeeshee meelahaasi ayaa imika ka mid ah dhulka ugu daran ee ay ka jirto xaaladda abaareed. Sidoo kale degaamadda Laas-doomaare, Huluul, Kal-sheekh, Kal-mac, iyo degaamadda kale ee hoos yimaadda degmadda Ceel Af-weyn ayaa dhamaantood-ba u baahan in gurmad lala gaadho dadka meelahaasi ku nool, kuwaasi oo ay ka bexeen wixii ay xoolo haysteen ee manaafacaadka u ahaa, iyadoo ay haatana muuqato in dadku ay u dhintaan cunto la’aan iyo haraad. Degaamadda ka tirsan gobolka Sanaag ee ay weriyeyaashu soo mareen waxay sheegeen in ay ku soo arkeen bakhtiga xoolaha oo isugu jira Adhi, Geel iyo Lo’da o meel walba daadsan, isla markaaana qoysaska qaarkood dhamaanba wixii ay xoolo haysteen in ay ka baxeen. Isku soo wada duuboo, guud ahaanba goboladda bariga Somaliland ayaa waxaa wakhtigan ka taagan abaar aad u daran oo wada saamaysay nolosha dadka iyo duunyada-ba, iyadoo sida laga soo sheegayo meelahaasi ay haatan xaaladu gaadhay in bakhtiga xooluhu uu tiro dhaafay, hase yeeshee imika loo baahan yahay in la bad-baadiyo dadka oo iyag-na qarka u saaran in ay dhintaan.